Ọdịnaya agaghị atụgharị na-enweghị oku na-aga-ime | Martech Zone
Kwa ọnwa Martech Zone ga - eweputa otutu ihe na - eduga maka nkwado, mgbasa ozi na nyocha Ohere. Ka saịtị ahụ na-eto eto na ewu ewu, agbanyeghị, anyị anaghị ahụ mmụba na-esote na ndu. Emechara m nweta ya - Enyochare m saịtị ahụ wee nyochaa ebe oku anyị na-eme gafere. Ọ bụ ihe anyị na ndị ahịa anyị na-elebara anya nke ukwuu mana emezughị m inyocha atụmatụ nke anyị maka itinye oku na omume nke ọma.
Enwere ọnọdụ 3 maka itinye oku na ntinye na ibe ọ bụla enyere na saịtị gị:
Na-Gbanye - nke a bụ CTA kachasị ike, itinye njikọ, bọtịnụ, ma ọ bụ ihe oyiyi dị mkpa maka ọdịnaya gị ga-agbanwe ndị nwere mmasị na-agụ ọdịnaya ịkekọrịta.
Na nso - ị ga-achọpụta ụfọdụ CTA gbara ọkpụrụkpụ na static dị n'akụkụ ọdịnaya anyị. Anyị ji n'aka na ha dị n'akụkụ na ndepụta RSS anyị, ebe nrụọrụ anyị na ekwentị mkpanaaka.
Site - ndị a bụ CTA zuru oke maka ngwaahịa na ọrụ azụmahịa gị na-enye. Ka ndị mmadụ n’agụ ịgụ ọdịnaya gị, ọtụtụ ga-amasi otu ị ga - esi nye aka na - ejere ha ozi ebe CTA dị ka mgbasa ozi nke isi na ukwu.
Ewezuga, n'ezie, bụ peeji ọdịda gị. Ibe ọdịda ga-abụ ebe njedebe - ọ bụghị ebe maka CTA na nhọrọ ndị ọzọ. Na-ele anya na ibe na saịtị gị, etinyere peeji gị site na oku na-aga-ime na-iyi, n'akụkụ, na gafee saịtị ahụ?
Emebeghị anyị, mana anyị abawanyela ọnụọgụ ndu anyị site na ~ 5 kwa ọnwa ruo karịrị 140 na-eduga kwa ọnwa. Nke ahụ bụ ihe na-abụghị-na-chaatị mma! Na enweghị anyị ịgbanwe olu nke ndị mmadụ na-eleta saịtị ahụ. Otu saịtị, otu ọdịnaya… ma a 2,800% mmelite na ntụgharị naanị site n'ịhụ na enwere oku na-eme ihe na ọdịnaya ọ bụla anyị mepụtara. Ndị a abụghị ihu na-egbu maramara ọkọlọtọ mgbasa ozi… ha dị mfe bọtịnụ, eserese ma ọ bụ ọbụlagodi ederede.
Chọta oku ime ihe n'ime ọdịnaya na saịtị gị kwesịrị ịdị mfe. Ndị na-ege gị ntị ekwesịghị iche echiche banyere ihe ha ga-eme ọzọ, gbaa mbọ hụ gwa ha ihe ha ga-eme ọzọ. Ọ bụrụ na ị gwa ha, ha ga-abịa.